Enwere ike inweta nweta backlinks dị mma site na saịtị PR dị elu?
Mgbe ị na-eke njikọ maka saịtị gị, ịkwesịrị ilebara anya na isi mmalite ị họrọ maka nzube a. Ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke webmasters na ndị ọkachamara SEO ọkachamara na-ekwu na akara azụ ndị kasị dị ike na-enyefe ihe njikọ bara uru bara uru sitere na ebe nrụọrụ weebụ dị elu, dị ka Google, YouTube, Wikipedia ma ọ bụ Facebook.
Anyị na-aga ịmalite isiokwu a na-eche na ị nwere akaụntụ azụmahịa na Facebook na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala ibute peeji maka ụlọ ọrụ gị.
Ya mere, dịka omume na-egosi, ihe niile ịchọrọ ịmepụta ọtụtụ okporo ụzọ dị mma na gburugburu saịtị gị bụ iji mepụta ọdịnaya site na iji okwu ọchụchọ dị mkpa ma wuo backlinks dofollow sitere na ebe nrụọrụ weebụ dị elu.
saịtị PR dị elu iji nweta akara azụ azụ dị mma
Ọ bụ ọrụ na-egbu mgbu iji nweta backlinks dị mma site na nnukwu ikike ngalaba karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-adịbeghị anya kụrụ gị na saịtị - cargo tricycle electric. Otú ọ dị, ịkwesịrị ịghara ịda mbà dịka usoro ntanetị dị iche iche na-eme ka ị banye na TOP nke engines ọchụchọ n'ime obere oge.
backlinks PR dị elu site na YouTube
YouTube bụ mgbasa ozi mgbasa ozi a ma ama nke Google. Njikwa ikike ngalaba nke isi iyi weebụ a bụ 10 n'ime 10. Ị nwere ike nweta akara azụ azụ dị elu site na isi iyi a, na-ebufe vidiyo gị n'ebe ahụ. Ihe niile ị chọrọ bụ ịmepụta vidiyo zuru ezu banyere ngwaahịa gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ n'ozuzu ma bulite vidiyo a na weebụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ịkwesịrị ịmepụta ihe ngosi vidiyo na-egosi, gụnyere saịtị gị URL na ya.
backlinks PR High from Wikipedia
Wiki bụ otu n'ime akwụkwọ nkà ntanetị kachasị n'ịntanetị nke enyere site na ndị ọrụ afọ ofufo. Ebe a na-edebe ihe ọmụma weebụ dị iche iche site na ikike ya na mkpa ya. Ọ bụ ya mere o ji nwee ọkwá kasị elu na Google site na ọtụtụ ajụjụ dị iche iche Njikwa ikike nke Wikipedia dịkwa 10 n'ime 10. Ọ bụ ebe zuru okè maka ịtụkwasị obi na ikike nke ngalaba ọbụla ma ọ bụ nke ọhụrụ maọbụ ọ dị adị. E nwere ọtụtụ ụzọ isi nweta akara azụmaahịa PR dị elu site na isi iyi a bara uru. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nweta nkwenye akwụkwọ, ihe ndị ahụ na-esikwu ike. Tupu ịdee akwụkwọ ọ bụla, ezigbo ndị mmadụ na-elele ma kwado ya. Ọ bụ ya mere a ga - eji wepụ akwụkwọ backlinks gị n'oge usoro nkwenye akwụkwọ.
Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ usoro bara uru nke ga - enyere gị aka inwe ikikere backlinks dị na Wikipedia n'agbanyeghị nkwenye niile:
Wulite akwukwo ohuru na Wiki, site na imeputa ihe obula na ya. Ruo oge ụfọdụ, ibe a ga-anọ na nyocha.
Wee họrọ Wiki peeji nke site na ụfọdụ ajụjụ ndị na-ewu ewu na pasta njikọ njikọ gị n'ebe ahụ. Ọ gaghị ekwe omume iji nyochaa niile ibe, ọ bụ ya mere ndị ọrụ afọ ofufo nke Wikipedia na-ejighị ajụ ajụjụ ndị na-adịghị ewu ewu.
Njikọ gị ga-apụta na ndepụta nke isi mmalite akwụkwọ.
Ọ bara uru ịkọ na nkwado ndabere na mpaghara Wikipedia abụghị njikọ. Ọ bụ ya mere njikọ sitere na isi iyi a agaghị ewetara gị okporo ụzọ. Otú ọ dị, iji mee ka ntụkwasị obi na ikike nke ebe nrụọrụ weebụ gị, ọ bụ ihe amamihe dị na iji nweta backlinks site na saịtị PR dị elu dịka Wikipedia.